အလိုက်စဥ်သည်: မှာ Created အားဖြင့် Added
အမျိုးအစားများ, အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ: Armati သင်အနိမျ့-Flow ပန်းရေချိုးခန်းကရိယာကိုပြောပြပါ
Liu ကာရှင်းခြင်းအားဖြင့် Posted
low-စီးဆင်းမှုလ်တာ အဆိုပါအမျိုးသားစွမ်းအင်ပေါ်လစီအက်ဥပဒေအားဖြင့်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ low-စီးဆင်းမှုလ်တာသိသာငွေစုနှင့်အတူအိမ်ရှင်သည်နှင့်သင့်ပြုပြင်သို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုအတွက်ရေရှည်တည်တံ့မည့်အတိုင်းအတာရှိနိုင်ပါသည်။ Non-Low-စီးဆင်းမှုလ်တာနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထိုကဲ့သို့သောအိမ်သာ, faucet aerators နှင့်ရေချိုးခန်းအကြီးအကဲများ, အဖြစ်အနိမ့်စီးဆင်းမှုလ်တာအတူတူ utility ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
အနိမျ့ Flow ပန်းရေချိုးခန်းခေါင်းဆောင်များ
အနိမ့်စီးဆင်းမှုရေချိုးခန်းအကြီးအကဲများစတုရန်းလက်မ (psi) နှုန်း 2.5 ပေါင်တစ်ဦးရေဖိအားမှာ 80 GPM ထက်လျော့နည်းတဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းမှာအတူသူများဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်မကြာသေးမီနိမ့်စီးဆင်းမှုရေချိုးခန်းအကြီးအကဲများပင် 2.0 GPM ထက်လျော့နည်းတဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုပေးနိုင်ပါသည်။ အနိမ့်စီးဆင်းမှု၏နှစ်ခုအခြေခံအမျိုးအစားများ ရေချိုးခန်းအကြီးအကဲများနေသောခေါင်းစဉ်:
Laminar-စီးဆင်းမှု - Laminar-စီးဆင်းမှုရေချိုးခန်းခေါင်းကိုရေစီးဖွဲ့စည်းစေမည်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုတိကျအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပေးပါလိမ့်မယ်။
Aerating - အနိမ့်စီးဆင်းမှုရေချိုးခန်းဦးခေါင်း၏ဤအမျိုးအစားသည်လေထုရေမှုန်ရေမွှားတစ်မြူဆိုင်းသောအမျိုးအစားဖွဲ့စည်းနှင့်အတူရေရောမွှေပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ရေနွေးငွေ့နှင့်အစိုဓာတ်ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောငွေပမာဏကိုဖန်တီးမည်, နှင့်စိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်။
အနိမ့်စီးဆင်းမှုရေချိုးခန်းအကြီးအကဲများ 5.5 GPM တစ်စီးဆင်းမှုနှုန်းသည်နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကွီးရှယျအိုမြားကိုအစားထိုးသင့်ပါတယ်။
အနိမျ့ Flow အိမ်သာ
အနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာနှင့် Ultra-အနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာရိုးရာအိမ်သာရေ၏ထက်ဝက်ပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါပြီ။ အနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာအစား 1.6 GPF ၏ 3.5 GPF, ပျမ်းမျှနေကြတယ်.
အနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာ၏ဒီဇိုင်းကြောင့်အချို့မော်ဒယ်တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်အိမ်သာရှင်းလင်းရန်မနိုင်သောအရေးဆိုရန်မီးအောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်နည်းစနစ်များနှင့်အိမ်သာစွမ်းဆောင်ရည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှဒီပြဿနာတွေကိုအဆင့်မြှင့်ပြီ, သူတို့က, အများစုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်နှင့်အတူ အရည်စွန့်ပစ်နှင့်အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်အပြည့်အဝ flush များအတွက်တစ်နှစ်ခွဲ flush option ကို.
ဆွဲငင်အား-ဗဟိုဘဏ်အနိမျ့ Flow အိမ်သာ - အနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာ၏ဤကြင်နာပန်းကန်လုံးကဆင်းတွန်းမှရေရိုးရာအလေးချိန်အသုံးပြုသည်။ သူတို့ကစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ဖိအား-ကူညီနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာကြောင်းလျော့နည်းဆူညံဖြစ်ကြသည်။
ဖိအား-Assisted အနိမျ့ Flow အိမ်သာ - အနိမ့်စီးဆင်းမှုအိမ်သာ၏ဤအမျိုးအစားများသောအားဖြင့် noisier ပေမယ်ဆွဲငင်အား-ကျွေးမွေးအိမ်သာနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ 45% အားဖြင့်ရေသုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကိုရေတွန်းချရန်တိုင်ကီအတွင်းမှတက် built လေထုဖိအားကိုအသုံးပြုသည်။
အဘယ်အရာကို faucet အကြောင်း?
ဟောငျးစုပ် faucets ကိုလည်းရေနဲ့ငွေအများကြီးဖြုန်းနိုင်ပါသည်။ က 2.5GPM ထက်ပိုမိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကသင်သည်သင်၏ faucets အစားထိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုခေတ်မမီတော့ faucer အစားထိုးရန်ကနေရှေးခယျြနိုငျသောစိတ်ကူးများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ သငျသညျပုံမှန် 1.5GPM ထက်ဒါမှမဟုတ် aerator ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လျော့နည်းအတူသစ်တစ်ခု faucet အတူကအစားထိုးခြင်းရှိမရှိရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ aerator သို့မဟုတ်စီးဆင်းမှု restrictir နှစ်ပေါင်းများစွာအချို့ကိုသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်သည့်လွယ်ကူပြီးစျေးပေါပြုပြင်မွမ်းမံပေးနီးပါးဆို faucet မှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
အနိမျ့ Flow ကရိယာအသုံးပြုခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးကျေးဇူးများ
များစွာသောအဆောက်အဦး codes တွေကိုအနိမ့်စီးဆင်းမှုလ်တာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ကတည်းကသို့သော်ကျနော်တို့လ်တာ၏ဤအမျိုးအစားသည်သင်၏ဆောက်လုပ်ရေးအဆိုပြုချက်ကိုဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်လိမ့်မယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါပြီ။ ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. အခြေခံအိမ်သာ, $ 75 နှင့် $ 450 အကြားကိုသာကရိယာကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအနိမ့်စီးဆင်းမှုကိုအိမ်သာကအလွယ်တကူထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. ပိုပြီး $ 100 အကြောင်းကိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင်းဖောက်သည်များအတွက် payback ရေအသုံးပြုမှုအပေါ်ငွေစုကြောင့်မြန်သုံးအဖြစ်နှစ်ပေါင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
low-စီးဆင်းမှုအိမ်သာလေး-အဖွဲ့ဝင်မိသားစုများအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ရေ 20,000 ဂါလန်ထက်ပိုကယျတငျနိုငျ
ယင်းပိုက်ပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးနှင့်စက်မှုအရာရှိကြီးများ (IAPMO) ကထုတ်ပြန်ချမှတ်
သင့်လျော်သောအမေရိကန်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းဌာန (ANSI) ဖြည့်ဆည်းရပါမည်
Armati အဖြစ်များသည့်ရေ faucet ပြဿနာများပြုပြင်သင်မည်သို့ကိုပြောပြပါ
ယနေ့ရေ faucets ပိုမိုခေတ်မီဖြစ်လာကြပါပြီ, ဤ faucets တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရာမှာများ၏တာဝန်ကပိုခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ တစ်ဦး faucet install ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတော်လေးတူညီသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ရဲ့နည်းပညာကိုသင်သတိပြုမိရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆောင်တတ်၏။
ဘုံ faucet ကိစ္စများ
ကချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်ပြီးတာနဲ့အချို့ကိစ္စများထိုကဲ့သို့သောပေါက်ကြား, ညှစ်သံမြည်နှင့်အခြားပြဿနာများကိုအတိုင်း, သင်တို့၏ faucet ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး faucet ကနေနိမ့်ရေဖိအားသည်၎င်း၏မှုတ်လွှဲသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလွှဲအဆို့ရှင်ဟာ faucet ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလွှဲသည့် faucet သို့သွားရေထိန်းချုပ်ဒါကြောင့်သင်ကသေးငယ်တဲ့အပျက်အစီးများနှင့်သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ပိတျဆို့နတေဲ့စေခြင်းငှါစင်ကြယ်-ကြောင်းစစ်ဆေးရပါမည်။ အဆိုပါလွှဲပိတျဆို့နတေဲ့မထားလျှင်, သင်လွှဲနေရာတွင်အစားထိုးဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
သငျသညျအနိမ့်ရေဖိအားအတွက်တရားခံဖြစ်မည်အကြောင်းနောက်ထပ်ဧရိယာ aerator ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလွှဲကဲ့သို့ aerator တစ်ဖြီးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါက unclog မှရှာလကာရည်ကိုသုံးပါရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သေချာပြဿနာ utility ကိုထံမှထွက်လာမယ့်ရေကိုဖိအားမပေးနှင့်ရေပေးဝေရေးအဆို့ရှင်အပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုဖွင့်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးစေပါ။
သင် faucet အသုံးပြုတဲ့အခါရေကိုအဓိကစီးဆင်းမှုမှပယ်တစ်ဦးအခိုးအငွေ့ sprays လျှင်သင်သည် aerator တင်းကျပ်စွာအပေါ်လွဲချော်သွားတာကြောင်းစစ်ဆေးချင်ပေလိမ့်မည်။
ကပိတျဆို့နတေဲ့နိုင်သကဲ့သို့, aerator ထံမှသတ္တုဓာတ်, တိပ်ခွေသို့မဟုတ်အပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားမယ့်အထည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြီးကိုသုံးပါ။ ထို့အပြင် aerator အဝတ်လျှော်စစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။
အဆိုပါ aerator reinstall နှင့်နောက်တဖန်စစ်ဆေးပါ။ ထိုပြဿနာကိုနေတုန်းပဲတက်ပြသထားတယ်ဆိုပါကသင်ကအက်သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေခြင်းငှါအဖြစ် aerator ကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရေ faucet ပေါက်ကြားကြောင်းတွေ့ရှတဲ့အခါမှာဒီယိုစိမ့်၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, လက်ကိုင်မှာထုပ်ပိုးခွံမာသီးတင်းကျပ်စမ်းပါ။
လိုအပ်သောလျှင်အို-လက်စွပ်ကိုအစားထိုးရန်, ရေပေးဝေရေးလိုင်းပိတ်, သင်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းထိုပြဿနာပေါ် မူတည်. အဆိုပါ faucet disassemble နှင့်ကျည်တောင့်အစားထိုးလိုက်ပါ။ အဆိုပါ o-ကွင်းအစားထိုးသောအခါ, မျိုးတွင်နှင့်အဆို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်၏အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေး။ ငါတို့သည်လည်းဆီလီကွန်-based အမဲဆီနှင့်အတူမျိုးတွင်ဏ-ကွင်းချောအကြံပြုပါသည်။
နောက်ထပ်ဘုံပြဿနာ faucet မျိုးတွင်ထံမှယိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးချုံ့စတိုင် faucet ကို install နေတယ်ဆိုရင်, သင်ထိုင်ခုံအဝတ်လျှော်အစားထိုးရန်နှင့် / သို့မဟုတ်အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရှိသမျှသည်အခြားသောရေ faucets, သင်သာအဆို့ရှင်ထိုင်ခုံကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရေ faucet ကို turn off ပြီးနောက်သင်တစ်ဦးဆူညံသံကိုကြားရတဲ့အခါရေသံတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတစ်ဦးလေကြောင်းအခန်းထဲကထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
သငျသညျပြီးသားလေကြောင်းအခန်းများကို install ကြလျှင်, ရေပေးဝေရေးကို turn off, ရေလိုင်းစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နဲ့ပြန်ရေကိုလှည့်။ ရေကို faucet အပေါ်လှည့်ပြီးနောက်သံကိုဖြစ်ပေါ်သောအခါ, အဆို့ရှင်အသစ်တခုအဝတ်လျှော်လိုအပ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ရေး line ကနေရေဖိအားများလွန်းမြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်လည်းအနိမ့်ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။
faucet လက်ကိုင် Operate ဖို့ခက်ခဲသည်
သငျသညျကိုလညျးသည့်အရာတစ်ခုကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ဆီလီကွန်-based အမဲဆီနှင့်အတူကချောဆီဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ရေပိုက်ပြင်သမားရဲ့တန်း faucet အမဲဆီ, ဆီလီကွန်မှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ်ရေနံဆံ့စေခြင်းငှါမဆိုချောဆီကိုမသုံးပါနဲ့။ ရေနံ-based စက်ဆီချောဆီရော်ဘာဖျံနှင့်အတူတုံ့ပြန်နိုင်ပြီးလက်ကိုင်လုပ်ကိုင်ရန် ပို. ပင်ခက်ခဲဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
လူနေအိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများအတွက်ပိုက်ပိုက်အများအပြားမျိုးရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော PEX, ကြေးနီနှင့် PVC အဖြစ်ပိုက်ပိုက်သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာများနှင့်သူတို့က installed ထားတဲ့အတွက်တည်နေရာပေါ် မူတည်. ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော, အနက်ရောင်သွပ်ရည်စိမ်နှင့်ကြေးဝါကဲ့သို့အချို့နဲ့အခြားပိုက်ပိုက်အမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ ရဲ့အသုံးအများဆုံးအသုံးပိုက်ပိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံး application ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါစို့။
သံမဏိပိုက်။ ဓာတ်ပုံပညာရှင် Hans Pixabay
သံမဏိအလွန်သပ်ရပ်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမယ့်အလွန် expensive.Stainless သံမဏိပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ချေးဖို့ဘာသာရပ်ဒေသများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအနီးအသုံးပြုကြသည်။ ပိုက်၏ဤအမျိုးအစားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ပိုက်၏အခြားအမျိုးအစားများကိုတွဲခံရဖို့အချို့သောအထူးသစ်သားဆက်စရာမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်နှင့်အတူသံမဏိပိုက်ထွေးမထားပါနဲ့။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားနှင့်အတိုအရှည်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
PEX ပိုက်ထူးထူးအပြားပြား။ ဓာတ်ပုံ Makdesignbuild.com
Pex ပိုက်လူနေအိမ်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များအတွက်လူကြိုက်များရွေးချယ်ရေးဖြစ်လာသည်တဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပလပ်စတစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားကနဦးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အစာရှောင်ခြင်း installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆောက်အဦးအတွင်း၌ရေဖြန့်ဖြူးဘို့ကအကောင်းဆုံးပိုက်စေသည်။ PEX ပိုက်ကြေးနီပိုက်ကျော်အားသာချက်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တစ်ကယ့်ကိုယိုစိမ့်-အခမဲ့ထုတ်ကုန်ပေးပါသည်။ အရေးအပါဆုံးအားနည်းချက်များတစ်ခုမှာခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပြင်ပတွင်ပလပ်စတစ်အလွှာဖြစ်ပါသည်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ကြောင့်ပြင်ပပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုမရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။နောက်ထပ်
ဖြတ်ထားပြီးအပြီးစင်ကြယ်သောကြေးနီ။ ဓာတ်ပုံ Cedarcityrecycling.com
ကြေးနီပိုက်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ကြာချိန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရန်အသုံးပြုအရှိဆုံးရိုးရာပိုက်ပိုက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသာလွန်ချေးခုခံပူနှင့်ရေအေးအတွက်အသုံးပြုရမည့်အကြီးပစ္စည်းများကိုပေးစွမ်းကြောင့်အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ကြေးနီပိုက်အသုံးမပြုခင်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကအတူတူရှိတာပါခံရဖို့ကပိုဆောင်း fittings လိုအပ်လိမ့်မယ်လိုဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမဂဟေကြေးနီပိုက်မှာအကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြေးနီသွယ်တန်းထားသောပိုက်ဂဟေဆက်ဖို့ဘယ်လိုဆောင်းပါးသင်ကူညီပေလိမ့်မည်။
PVC ပိုက်။ ဓာတ်ပုံ publicworksgroup Flickr ကို
PVC ပိုက်ပိုက်မိလ္လာ applications များနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအအေးနှင့်ပူသောက်သုံးရေများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ PVC ပိုက်ကအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်ဘယ်မှာလျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. မိမိတို့၏အထူနှင့် configuration အပေါ်ခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖိအားရေပိုက်, မုန်တိုင်းရေနုတ်မြောင်းစနစ်များပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများကဲ့သို့တူညီသောပုရဆေိုးပိုက်အဖြစ်အတူတူပင်မဟုတ်, မရှိကြပေ။ သောက်သုံးရေ application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပလပ်စတစ်ပိုက်ထုတ်ကုန်များသောအားဖြင့်ထုတ်ကုန်တွင် NSF / ANSI နျ Standard 61 များ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာကြောင်းညွှန်ပြရန် "တွင် NSF-PW" သို့မဟုတ် "တွင် NSF-6" တစ်ခုခုနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။
သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်။ ဓာတ်ပုံ Home Depot
သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်လူနေအိမ်စီမံကိန်းတွေများအတွက်စံအဖြစ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သံချေးသေးငယ်တဲ့အချင်းပိုက်အတွင်း၌တည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့်သို့သော်အချိန်နှင့်အတူကလျော့နည်းမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ပိုက်အလုံအလောက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, သင်စကေးအဖြစ်ရေသံချေးခြေရာတွေအတူ faucet ကနေလာမယ့်မြင်နိုင်ပါသည်ပိုက်၏အတွင်းပိုင်းကနေခြိုးနိုငျသညျ။ သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်မီးခိုးရောင်ရေသို့မဟုတ် Non-သောက်သုံးရေသယ်ယူရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြေးဝါကိုပိုက်။ ဓာတ်ပုံ EugenesDIYDen Pixabay
ဒါဟာ% ကြေးနီ 67 မှ 85% နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရဲ့လျှင်ကြေးဝါကိုပိုက်ပိုက်, ကြီးသောသံချေးခုခံပိုက်သည်။ အကောင်းဆုံးကြေးဝါကိုပိုက်တန်းသည့်အလွိုင်း 85% ကြေးနီပါရှိသည်လာသောအခါရရှိသောနှင့်အနီရောင်ကြေးဝါကိုပိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကြေးဝါကိုပိုက်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့သံချေးမကပိုက်အတွင်း၌ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပါဘူးတဲ့ရှည်လျားတည်တံ့ပစ္စည်းပေးသည်။ ကြေးဝါကိုပိုက်ပိုက်သံမဏိပိုက်ထက်ချည်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစုပ်စက် fittings, ရေလှောင်ကန်များနှင့်ရေတွင်းများကဲ့သို့ပူ-ရေနှင့်အကြီးစားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ, အဘို့အလွန်ကောင်းနေတယ်။ ကြေးဝါကိုပိုက်ပုံမှန်မဟုတ်တော့မဆိုအခြားပိုက်ပစ္စည်းထက်ကြာရှည်လေ့ရှိပါတယ်။ ကြေးဝါကိုပိုက်ယေဘုယျအား 12-ခြေလျင်ဖြောင့်အရှည်အတွက်လာပါတယ်။
သံပိုက်ကိုသွန်းလေ၏။ ဓာတ်ပုံ McWane, Inc
သို့ကာစ်သံပိုက်ပိုက်ပုံမှန်အားခေါင်းလောင်း-and spigot အမျိုးအစားအဖြစ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာ Threaded အဆစ်တို့နှင့်လည်းတွေ့ရှိရပေမယ့်ခေါင်းလောင်းနှင့် spigot တဦးတည်းထက်ပိုစျေးကြီးတယ်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပိုက်ရေနုတ်မြောင်းသို့မဟုတျရှံ့စနစ်များပေါ်တွင်အဓိကပိုက်အဖြစ်မဆိုပုံမှန်အားဖြင့်ရေဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားပိုက်, သို့မဟုတ်မြေအောက် installation ကို သာ. ဖြစ်ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကားထုတ်လုပ်သောအသေးဆုံးအရွယ်အစားလူနေအိမ် applications များပေါ်တွင်အသုံးပြုခံရဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့4"ပိုက်သည်။ သို့ကာစ်သံပိုက်မိုးသည်းထန်စွာသည်နှင့်သင်ပူးတွဲစုဝေးနေစဉ်ထောက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
Armati သင်အိမ်သာကိုပြောပြပါ: အိမ်သာဝယ်လမ်းညွှန်သိကောင်းစရာများ
အိမ်သာကယ့်ကိုအရေးကြီးသောအဆက်မပြတ်အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ရေချိုးခန်း၏အရှိဆုံးသတိမမူအပိုင်းပိုင်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ပြည်သူ့အစားအိမ်သာကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့ရေချိုးကန်ဒါမှမဟုတ်အနတ္တအပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောရိုးရာ, အနိမ့်အဆင့်အဖြစ်အိမ်သာအများအပြားအမျိုးအစားများ, မြို့ရိုးကိုဆွဲထားပြန်ရိုး, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အများအပြားကပို။ ဒါပေမယ့်အားလုံးအိမ်သာစံအိမ်သာဖြစ်ကြောင်းသိရန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အိမ်သာဝယ်လမ်းညွှန်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။
အိမ်သာကို install ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာရနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတာ
ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်နိုင်သောတစ် branded နာမကိုအမှီနေအိမ်သာကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစား
တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ် elongated အိမ်သာပန်းကန်များအကြားဆုံးဖြတ်
အဆိုပါဝယ်လမ်းညွှန်အပြင်, ဤအရေးကြီးသောအိမ်သာ features တွေထည့်သွင်းစဉ်းစား
တချို့ကအိမ်သာ Saving- ရေသမားရိုးကျအိမ်သာ၏ 1.28 ဂါလန်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦးရေအသိလက်မှတ်, 1.6 ဂါလန်သို့မဟုတ် flush နှုန်းလျော့နည်းနှင့်အတူ flushing High-ထိရောက်မှုအိမ်သာရှိနိုငျတယျ။
dual Flush- သင်အရည်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း flush သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်မှုအတွက်အပြည့်အဝ flush ရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူပေးနိုငျတဲ့အိမ်သာရွေးချယ်ဖို့လိုသလား?
အိမ်သာ Bowl Height- နှစ်သိမ့်အိမ်သာကို non-ရိုးရာအိမ်သာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ တစ်ဦးကစံပန်းကန်အနားကွပ်အကြောင်းကို 15 လက်မကြမ်းပြင်အထက်တည်ရှိပြီး, ဒါပေမယ့် 17 လက်မမှာအိမ်သာဖလားအကောင်းဆုံးသူတွေကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ တစ်ဦးက 17 လက်မနှင့်ပင် 19 လက်မအိမ်သာပန်းကန်အမြင့်လည်းမသန်မစွမ်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူအမေရိကန်များနှင့်အတူလိုက်နာမှု၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပန်းကန်ထက်ပိုအာကာသယူထားသောပေမယ့်, တစ်ဦး elongated ပန်းကန် shape- ပိုပြီးထိုင်ခုံအာကာသထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်နည်းပါးလာအနံ့မှလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦး elongated ပန်းကန် "6 မှတက်မယ့်စံပန်းကန်ထက်ပိုရှည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤကိုယူပါ။
နှစ်ဦးအပိုင်းအစအိမ်သာ Toilet- One Piece တဦးတည်းအပိုင်းအစရဲ့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်သူတို့ကတင့်ကားများနှင့်ပန်းကန်များအကြားမှာရှိတဲ့စုဆောင်းဖုန်မှုန့်လေ့ရှိပါတယ်။ one-အပိုင်းအစအိမ်သာကပိုစျေးကြီးတယ်နဲ့တစ်ဦးနှစ်ဦး-piece အအိမ်သာထက်တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အမျှသူတို့နီးပါးတူညီကြသည်။
flush Systems- ရော်ဘာ flappers အတိတ်ကအရာဖြစ်ကြ၏။ အဟောင်းကို flappers ထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြောင်းအသစ်များ flush တာဝါတိုင်ရှာဖွေပါ။ ဖိအား-ကူညီရန်အိမ်သာဆွဲငင်အားအိမ်သာထက်ပိုပြီးရေအကျိုးရှိစွာ flushers ဖြစ်ကြသည်။
အနည်းဆုံး3လက်မ flush အဆို့ရှင်ရှိသည်အိမ်သာပြီးနောက် Valve- Go ကို။ ရိုးရာအိမ်သာသစ်တွေထက်လျော့နည်းတွန်းကန်အားကိုအပ်ကြောင်း2လက်မအဆို့ရှင်ရှိသည်။
ကြမ်းတမ်း-in ကို Dimensions- အဝေးသင်ကျောရိုးမှရေကိုလိုင်းဝင်ပေါက်မှမော်ဒယ်ကနေမော်ဒယ်မှကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါကြောင့်သင်သည်သင်၏အသစ်ကအိမ်သာ get မတိုင်မီမေးကြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့အိမ်သာမြင့်မားတဲ့အကူးအပြောင်းဒေသများအနီး install လုပ်ထားရမယ့်အခါ Noise- ဆူညံသံအချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုပိုပြီးကလူအသီးအသီးသောနေ့ရက်သစ်ကိုထူးခြားဆန်းပြားသောအရောင်အဆင်းကြိုးစားနေပေမယ့်ရိုးရာအဖြူရောင်ပြီးနောက် 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုသွားလာရင်းထက် Color- ပို။
ရေ Lines- အသုံးပြုမှုအစားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သံမဏိရေလိုင်းများသို့မဟုတ်တင်းကျပ်မှာ chrome-platted ကြေးနီလိုင်းများ။
Shut-OFF Valve- တစ်ပိတျ-ချွတ်ဆို့ရှင်များအတွက်ဆက်သွယ်မှု၏မျိုးစုံမျိုးရှိပါတယ်။ ဂဟေဆက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်တစ်ဦးချုံ့ connection ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောကွန်နက်ရှင်အချို့ကိုမျိုးလိုအပ်မယ်သကဲ့သို့သင်တို့အဟောင်းကိုသံပိုက်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းသေချာပါစေ။
ဤရွေ့ကားသင် US မှာရှာတှေ့နိုငျသောထိပ်တန်းအိမ်သာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအားလုံးယခင်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းနှင့်ငွေဘယ်လောက် client ကိုဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။
တူတူဒရော-တူတူဒရောအိမ်သာထုတ်လုပ်သူများ၏ကြီးမားသော3တစ်ခုဖြစ်သည်
Kohler- Kohler ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာအလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန်နျ Standard-သည်စင်ကြယ်သောစျေးနှုန်းအမေရိကန်နျ Standard အိမ်သာတစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူပြိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာသုတ်ပုဝါ Ring ကိုနှင့်အခြားရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတပ်ဆင်မြင့်
ရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းပုံမှန်ပြန်မွမ်းမံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတဲ့အခါမှာ install လုပ်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်အရာတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျကိုဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ရန်မသိရပါဘူးလျှင်သင်မလိုအပ်တဲ့တူးဖော်ခြင်းအားဖြင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေကြွပ်ကျော်တူးဖော်နိုင်အဖြစ်သို့သော်လည်း, ထို့နောက်သင်ပိုကြီးပြဿနာများကိုသို့ run နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို install တဲ့အခါမှာသင်အသုံးပြုနိုင်သောအချို့အကြံပြုထွဋ်ဖြစ်ကြသည်။
သင့်ဒေသခံအဆောက်အဦ codes တွေကိုနှင့် ADA လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူစစ်ဆေးနှစ်ဆမှအစဉ်အမြဲသတိရပါ။
ဤအအကြံပြုထွဋ်အများတို့သည်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူနေထိုင်ရာ Code ကို (IRC) မှခေါ်ဆောင်သွားမသန်မစွမ်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အမျိုးသားမီးဖိုချောင် & ဗာအစည်းအရုံးကထုတ်ဝေတဲ့နေကြသည်။
Mirrors ကတော့ installed ခံရမှန်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအမြင့်မှာ installed နိုင်ပါသည်။ အထွေထွေလမ်းညွှန်အဖြစ်သူတို့ 38 နှင့် 42 လက်မအကြား installed နိုငျသညျ။ ဤသည်တိုင်းတာခြင်းအဆိုပါ finish ကိုကြမ်းပြင်ကနေတိုင်းတာမှန်ရဲ့အောက်ခြေမှာအမြင့်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ထောက်ခံချက်မှန်အဆိုပါ finish ကိုကြမ်းပြင်အထက် 40 လက်မထက်မမြင့်ထင်ဟပ်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေအစွန်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားခံရကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံသငျသညျဗေဒရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မြို့ရိုးအနှင့်အတူမှန်နှင့်အချည်းနှီးသောဗဟိုချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာရေချိုးအများပြည်သူကအသုံးပြုလိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီသန့်စင်ခန်းများတွင်တစ်ခုတည်း Full-အရှည်မှန်တပ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။
ရေချိုးခန်းစင်ပေါ်များအတွက် installation အမြင့်
စင်ပေါ် installed ခံရကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောမြင့်တက်မှာ installed နေကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ထို့နောက်လည်း mirrors.However အဖြစ်, ဒီရေချိုးခန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါမည်နှင့် niche အစားစင်ပေါ်ရှိသည်ဖို့သစ်ကိုလမ်းကြောင်းသစ်လည်းမရှိ3ခြေ4ခွကေိုအကြား installed နိုင်ပါသည်။
ရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်း: ဆပ်ပြာဒီကနေ့ရဲ့ဟင်းလျာ / ဆပ်ပြာသာသနာ
အဆိုပါဆပ်ပြာပန်းကန် 44 လက်မသကဲ့သို့မြင့်မားသော 54 လက်မသို့မဟုတ်တစ်ခုအနီးစပ်ဆုံးအမြင့်မှာ installed ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆပ်ပြာပန်းကန်အမြင့်တည်နေရာရေချိုးခန်းမှုန်ရေမွှားထံမှထွက်တည်ရှိသောခံရကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါဆပ်ပြာသာသနာနိမ့်ဆုံး 40 လက်မမှာ installed နှင့် 48 လက်မသကဲ့သို့မြင့်မားသောရမည်ဖြစ်သည်နေစဉ်။ အကောင်းဆုံးကတော့သည့်ဆပ်ပြာပန်းကန် 48 လက်မမှာ installed ကြလိမ့်မည် ကဆပ်ပြာသာသနာရဲ့အလျှင်သို့သော်သူတို့၏တွန်းအားပေးခလုတ် FF အထက်တွင် 44 "အများဆုံးတည်ရှိသောရပါမည်။
မျက်နှာသုတ်ပုဝါ Ring ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအမြင့်
အဆိုပါသုတ်ပဝါလက်စွပ်အဆိုပါ finish ကိုကြမ်းပြင်ကနေတိုင်းတာ 50 လက်မနှင့် 52 လက်မအမြင့်, အကြား installed ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်အနတ္တကနေတိုင်းတာနေတယ်ဆိုရင်ထို့နောက်အထက် 20-22 လက်မဆွဲထားခံရကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုအကြွင်းမဲ့အာဏာနိမ့်ဆုံးအမြင့်ဟာအချည်းနှီးသောကောင်တာကနေတိုင်းတာလက်ဆေးပုဆိုးအတွက် ", လက်သုတ်ပုဝါအဘို့အ 36" 18 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသုတ်ပဝါရထားလမ်းအမြင့် installation ကိုရေချိုးခန်းအမျိုးအစားနှင့်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရထားလမ်းရေချိုးခန်းကလေးများကအသုံးပြုလိမ့်မည်သည့်အခါအတူတူပင်အမြင့်မှာ install လုပ်ထားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ဦးကမျက်နှာသုတ်ပုဝါရထားလမ်းကြမ်းပြင်အထက် 48 လက်မ installed ခံရကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းလျှပ်စစ်ဆိုင်များတွင်၏တည်နေရာနဲ့အလှဆင်ကြွေပြားအလုပ်စစ်ဆေးချင်တယ်။ မျိုးစုံသုတ်ပဝါသံလမ်းကို install အခါ, အမြင့်ဆုံးဖြစ်, ပြီးတော့အဲဒီအဆင့်မှာသုတ်ပဝါခေါက်ပါလိမ့်မယ်သောတဦးတည်းကိုတိုင်းတာ။
အဆိုပါသုတ်ပဝါအောက်ခြေနှင့်ဒုတိယရထားလမ်းကို install ဖို့ရာအရပ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်ရှိရာနယ်မြေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမာကု2လက်မ။
အိမ်သာစက္ကူအလိပ် Holder အမြင့်?
အိမ်သာစက္ကူလိပ်ကိုင်ဆောင်သူကြမ်းပြင်ကနေ 19 နှင့် 26 လက်မအကြား installed နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားမသန်မစွမ်းနှင့်အတူအက်ဥပဒေအမျိုးသားမီးဖိုချောင် & ဗာအစည်းအရုံးဟာစံပြအမြင့်အဖြစ် 19 လက်မအကြံပြုနေချိန်မှာ 26 လက်မကိုသုံးပြီးအားပေး။ သငျသညျအာကာသတွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်အနတ္တ၏ဘေးထွက်ကပူးတွဲစဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။
ရေချိုးခန်းပုံးပုံမှန်အားဖြင့်ချောကြမ်းပြင်အထက် 54 လက်မမှာ installed နေကြသည်။ သငျသညျအများအားဖြင့်တစ်ဦး 36 လက်မစံအနတ္တပေါင်းကြား၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေရာ 18 လက်မရှိသည်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်ခါတစ်ရံမှန် / ကက်ဘိနက်ပေါင်းစပ်ဒါကြောင့်ကောင်တာများ၏ထိပ်ပေါ်မှာ 12 လက်မမှာ installed ရှိသည်ဖို့သေချာပါစေရွေးကောက်တော်မူသည်။
ဆုပ်ယူဘားကြမ်းပြင်အထက်အနည်းဆုံး 33 "-36" မှာနေရာချရပါမည်။ တပ်ဆင်ဘေးထွက်မြို့ရိုးကိုဆုပ်ကိုင် bar ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်အခါနောက်ဘက်မြို့ရိုးမှ 42 လက်မအများဆုံးတည်ရှိသောနှင့်နောက်ဘက် wall.There ထံမှ 12 လက်မသက်တမ်းတိုးရေး, 54 လက်မရှည်လျားနိမ့်ဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်သည့်အမေရိကန်လူမျိုးတို့၏အကြံပြုအဖြစ်ဆုပ်ကိုင် bar ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည် ဆုပ်ယူဘားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး၌မသန်စွမ်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူ။
လက်အခြောက်ခံစက်များများအတွက် installation အမြင့်
သူတို့သာနိမ့်ဆုံး force.These ယူနစ်သူတို့ protrude နိုင်ပြီးတစ်ဦးခြားနားအရောင်ကနေဖြစ်သင့်မည်မျှရိုသေလေးစားမှုအတွက်တိကျတဲ့ ADA အတိုင်းအတာတွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်လျှောက်ထားအလွယ်တကူ operated ခံရနိုင်ဖြစ်သင့်အဖြစ်လက်အခြောက်ခံစက်များ, အခြို့ကိုပိုမိုတိကျသောလမ်းညွှန်ချက်ရှိသည်။ အဆိုပါတွန်းအားပေးခလုတ်ကို 38 အနည်းဆုံးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ကြမ်းပြင်အာကာသနှင့်အတူ FF အထက်တွင် 30 လက်မမှာ installed ရပါမည်တစ်ခုထက် ပို. လက်လေမှုတ်စက်တပ်ဆင်ထားသည် them.When များ၏ရှေ့မှောက်၌ "48 x", ဒုတိယယူနစ် 42 အကြား installed နိုင်ပါတယ် "-48" ချောကြမ်းပြင်အထက်။
Armati ဘယ်လိုရေချိုးကန် Refinish ရန်သင့်အားသှနျသငျ
အဆောက်အဦးအပြင်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းတော့ဘူးရုံ poolside နှင့်အများပြည်သူကမ်းခြေအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်။ သူတို့ကအစာရှောင်ခြင်းဟာနေ့တိုင်းအိမ်မှာရေချိုးခန်းတစ်ခုလန်းဆန်းထို့အပြင်ဖြစ်လာပါတယ်။
Armati သင်သည်ရေချိုးကန်၏ခန္ဓာဗေဒသှနျသငျနှင့်အစားထိုး Install လုပ်နည်း
Armati တစ်ခုဆန့်ကျင်မီးလောင်ဒဏ်ရာ Valve ကို Install လုပ်နည်းကိုသင်သွန်သင်
သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာ anti-မီးလောင်ဒဏ်ရာအဆို့ရှင်ကို install ခြင်းဖြင့်ရုတ်တရက်ရေချိုးခန်းရေအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအားရပ်တန့်။
Armati တစ်ထောင့်ပန်းရေချိုးခန်းကို Install လုပ်နည်းကိုသင်သွန်သင်